नेकपामा याै*न काण्डकाे राशलिला, अब मुछिने भए कैलालीका अध्यक्ष! (अडियाेसहित)
काठमाडाैँ २६ असाेज- सत्तारुढ दल नेकपाका नेता पछिल्लाे समय याैनकाण्डमा मुछिन थालेका छन्। निवर्तमान सभामुख महरा र नेकपा नेता देवेन्द्र पाैडेलमाथि एक महिलाले किताब नै निकालेर अाफूमाथि याैन दुष्पर्यास भएकाे लेखेकि छन्। साेही क्रममा कैलाली नेकपा अध्यक्षकाे पनि यस्तै याैनका रासलिलाकाे कुराकानी बाहिरिएकाे छ।
उनीहरुकाे कुराकानी जस्ताकाे त्यस्तै
भन डार्लिङ : किन फोन काटेको ? छोरा आएको थियो बोलाउन त्यसैले फोन काटेको के । घर नजिकैको होटलमा अलिअलि खाँदैछु । बुढी कता छन् ? बुढी घरमै छिन् ।
यो टेलिफोन संवादको अंश हो । संवाद अनुसार कुरा गर्ने पुरुषको छोरा र श्रीमतीसमेत भएको स्पष्ट छ । यो संवाद कुनै अल्लारे केटाकेटीबीचको होइन, कैलाली नेकपाका अध्यक्ष रतन थापा र उनकै भनाइ अनुसारकी प्रेमिकाको हो ।थापा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । २ श्रीमती र पाँच सन्तानका पिता थापाको टेलिफोन संवाद यत्तिकैमा रोकिँदैन उनकी प्रेमिका भनिएकी महिला भन्छिन रक्सी खाएको बेला मात्रै याद गर्ने माया व्यवहारमा देखाउनु पर्यो ।
संवादको केही अंश
थापा : मेरो जीवनमा तिमी बाहेक अरु कोही छैन । तिमीसँग हुनुपर्ने सबै भइसकेको छ अब फेरि कस्तो माया गर्ने ?
महिला : माया भनेको त्यत्ति मात्रै हो र ? म हजुरले बोलाएको बेला सँधै आउछु हजुर आउनु हुन्न
थापा : हजुर जस्तो जहाजमा आइरहने पैसा मसँग कहाँ छ र ? ‘ल ल हजुर जैले भनिबक्सिन्छ म आउँछु ।
महिला : म भोलि नै आउनु भन्छु हजुरलाई
थापा : हुन्छ ल ल टिकट पाए भोलि नै आउँछु । म साथीसँग छु । सबै चिज गरिसकेको छु अब कस्तो माया चाहियो ?
दुई जनाबीचको यतिसंवाद भएपछि अरुको अघि आफ्नो पोल खोलेकोले रिसाएर होला महिलाले फोन काट्छिन् । थापा मदिरा सेवन पाटनरसित भन्छन्– महिलाहरु आफ्ना कुरा खोल्दा यस्तै गरेर रिसाउँछन् । यो महिला अर्बपति छ, नेवार समुदायकी हो निक्कै राम्री पनि छ । यिनीहरुको अष्ट्रेलियातिर समेत कारोबार छ । श्रीमान छैन एक छोरी छ । मैले नेपालगञ्ज आउ भन्ने बित्तिकै काठमाडौंबाट जहाजको टिकट काटेर आइहाल्छ थापाले साथीलाई सुनाउँछन् ।
फोनमा बारबार ती महिलाले माया नगरेको गुनासो गर्छिन् । सांसद थापाले उनलाई जवाफ दिँदै भन्छन् मैले कम माया गरेको छु र ? महिलाले आफ्नो पैसा व्याजमा लगाउन सहयोग नगरेको गुनासो समेत गरेकी छन् । केही महिना अघिको थापा र उनकी प्रेमिकाको यो अडियो बाहिरिएको छ ।
अडियाे सुन्नुहाेस् यहा क्लिक गर्नुहाेस :